Tsidiho i Porto afaka roa andro | Vaovao momba ny dia
Tsidiho i Porto afaka roa andro
Susana Garcia | | seranan-tsambo
La Porto, tanàna portogey Toerana misy hatsarana tsy azo lavina, toerana iray azo zahana mora foana ary misy toerana mahaliana sasany. Raha te hitsidika an'i Porto ianao afaka roa andro monja, amin'ny fialantsasatra amin'ny faran'ny herinandro tsotra dia azonao atao ny manararaotra ny fijanonanao hahitanao ireo faritra manandanja indrindra eto an-tanàna.
Izahay dia manolotra izay rehetra tokony hataonao jereo ao Porto ao anatin'ny roa andro amin'ny dia. Manomboka amin'ny faritra afovoany indrindra ka hatrany amin'ny toeram-boaloboka ao Vila Nova de Gaia mpifanila vodirindrina aminy. Ankafizo ity tanàna Portiogaly mahafinaritra fantatra amin'ny divay ity, izay misy zavatra betsaka kokoa azo jerena noho ny famokarana divay taloha.
1 Andro voalohany any Porto
1.2 Garan'i Sao Bento
1.3 Fivarotam-boky Lello
1.4 Stock Exchange Palace
1.5 Katedraly an'ny Sé
2 Andro faharoa an'i Porto
2.1 Ribeira sy Douro Cruise
2.2 Tanàna manodidina an'i Barredo
2.3 Tsenan'i Bolhao
Andro voalohany any Porto
Ny andro voalohany ao Porto dia tsy maintsy atokana ho an'ny faritra afovoan-tanàna, izay ahitantsika ny sasany amin'ireo toerana manandanja indrindra avy amin'ny tanàna. Afaka manao zotra amin'ny sari-tany isika, saingy tsy maintsy tadidintsika fa ny toerana toa ny Lello Bookstore, izay misy ny filaharana, tsara kokoa ny mitsidika azy ireo amin'ny maraina. Ny faritra taloha amin'ny tanàna dia tsy dia lehibe loatra ka tsy afaka mivezivezy mora foana isika ary mahita zavatra maro ao anatin'ny iray andro.
Iray amin'ny anao io tranobe manan-tantara manan-danja indrindra ary io no toerana izay ahitantsika ny fomba fijerin'ny vorona tsara indrindra ny tanàna. Ny Church of the Clérigos dia manana fomba Baroque ary ao anatin'io ilay tilikambo malaza. Izy io dia teboka iray raha te-ho very eny an-dalambe ao an-tanàna isika, satria izy dia iray amin'ireo faritra avo indrindra ao aminy. Tsara kokoa ny mitsidika azy eo am-piandohan'ny làlana, satria tsy maintsy miakatra dingana ianao ary mila angovo fanampiny isika.
Garan'i Sao Bento
Raha tonga tao an-tanàna tamin'ny lamasinina isika, dia efa tsy ho zahana intsony ity toerana ity. Ny gara Sao Bento dia efa antitra sy tena miavaka, indrindra noho ireo taila Portiogey mahazatra amin'ny loko fotsy sy manga. Izany dia fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX ary toa manana tile roa alina mahery izy io.
Fitsidihana iray hafa ity izay mety haharitra kely kokoa noho ny nantenaintsika, fa noho ny filaharana ny ankamaroany, satria tsy dia lehibe loatra ny fivarotam-boky. Fivarotamboky Lello manolotra tohatra tsy mampino ary mamela anao handeha manodidina haka sary tsara tarehy.
Ny Stock Exchange Palace dia tranobe mahafinaritra an'i neoclassical fomba tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Tsara tarehy ety ivelany, fa ny tsara indrindra miandry antsika ao anatiny, miaraka amin'ny fijanonana mahaliana sy fitsangatsanganana mitarika. Tokony ho hitanao ny Arab Hall, voaravaka tsara, ny Patio de las Naciones na ny Sala Dourada, voaravaka ravina volamena.
Katedraly an'ny Sé
Ny Katedraly Sé na Katedraly Porto no trano fivavahana lehibe indrindra. Izy io dia manana maritrano miaraka amina fomba maro karazana, miaraka amin'ny endrika hita taratra avy amin'ny Romanesque tamin'ny taonjato faha-XNUMX, miaraka amin'ny lafiny fiarovana sy mahonon-tena. Na izany aza, misy ihany koa ny ampahany amin'ny fomba Gothic satria lava ny fananganana azy, niditra tamin'ity fomba vaovao ity tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Ny jirofo azy dia manana fomba Gothika ary iray amin'ireo faritra tsara tarehy indrindra amin'ny katedraly, satria somary mihenjana ny ao anatiny, mitovy amin'ny Romanesque.
Andro faharoa an'i Porto
Amin'ny andro faharoa dia mila manokana fotoana hivezivezena kely kokoaAmin'ny fomba milamina, mba hahafantaranao ny moron'ny renirano ary indrindra hitsidihana ireo orinasa mpamokatra divay any an-dafin'ny ony, izay mitondra antsika any Vila Nova de Gaia.
Ribeira sy Douro Cruise
Ny faritra Ribeira na ny moron'ny Duero dia fitsangatsanganana mahafinaritra foana. Mora ny mahita toerana mahaliana, fa ambonin'izany rehetra izany dia mila miezaka ianao a fitsangantsanganana an-dranomasina mahafinaritra. Ao amin'ny ribeira koa isika dia hahita trano fisakafoanana, fisotroana ary fivarotana zavatra mahazatra, hahazoana fahatsiarovana. Toerana tena mahavelona sy mampiala voly.
Tanàna manodidina an'i Barredo
Ireo izay maniry hahita ny Seranan-tsambo tena izyTsy maintsy mamakivaky ny Barrio do Barredo ianao, feno arabe ety, lavarangana taloha ary akanjo mihantona manome endrika simba nefa tena marina ny tanàna. Tanàna mangina misy làlana kely izay mora very, na dia afaka midina mora foana hamonjy ny morontsiraka indray aza isika.
Mila mandeha mitsangatsangana ianao Tsenan'ny angano tena porto. Tsena taloha ahafahanao mahita vokatra mahazatra.
Raha tonga ny fotoana dia afaka mandeha any amin'ny Don Luis I Bridge, mamela an'i Porto any aoriany. Afaka ampandalovina amin'ny fiara na an-tongotra izany, mankafy ny traikefa amin'ny fananana fomba fijery mahaliana ny tanàna.
Tonga tao Vila Nova de Gaia, mila mitady fitsangatsanganana ianao amin'ny alàlan'ny divay mahafinaritraMba hankafizana, mazava ho azy, ny divay malaza amin'ny seranana. Ny sasany amin'izy ireo dia Sandeman Porto na Ferreira de Oporto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » seranan-tsambo » Tsidiho i Porto afaka roa andro
Tsiambaratelo 5 an'i Madrid izay tokony ho fantatrao